Photo | Qof dhaawac ah oo jiifa isbitaalka Istarlin/Sawir/Kaydka/Abdijamal/Ergo
Hay’adda MSF oo bishii Janaayo oo ka baxday isbitaalka, ayaa waxaa muuqanayo saamayn ay arintaasi ku yeelatay hawlihii isbitaalka, MSF saddex bilood ayey uga tageen daawo uu ku sii shaqeeyo taasoo hadda dhamaatay siday sheegayaan hawl wadeenadda isbitaalku.
Cumar Cali Tarabi oo ah agaasimaha isbitaalka ayaa sheegay in wakhtigaan daawo aysan oolin isbitaalka, ayna ku amraan dadka inay la yimaadaan daawooyinka si loogu daaweeyo, “Dadku wuxuu daawo ay helaan banaanka ayey kala imanayaan, annaguna wixii aan hayno ayaan siinaynaa” arrintaan ayaa waxaa dareemay dhamaan dadka deegaanka tanoo keentay inay isugu yimaadaan shir ay dhaqaale ururin u galaan sidii isbitaalka daawo loogu heli lahaa.
Axmed Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsatadda degmada ka tirsan ayaa sheegay inay kulan isugu yimaadeen ay ku go’aansadeen inay isbitaalka u ururiyaan 66 kun oo dollar, haddana ay hayaan 8 kun ayna wadayaan tan iyo intay soo dhamaystirayaan, ayna dawladda Somaliyana u gudbiyeen cabashadda isibtaalka.
Dr. Saleebaan Maxamed Saalax, oo ka mid takhaatiirta degmada oo isna kulankii ka hadlay ayaa sheegay in loo bahan yahay gacan sin joogto ah oo isbitaalku helo, si loogu helo daaweyn dadka bukaanadda ee hadda jiifa, siduu sheegay takhtarku isbitaalka ayaa hadda waxaa jiifa 52 bukaan.
Isbitaalka Istarliin ee degmadda guraceel ayaa ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsan uguna mashquulka badan goobaha caafimaad eek u yaal goboladda dhexe hawlisii ayaase gaabis noqday shantii bilood ee ugu dambaysay kadib marki hay’addi mudo dheer gacanta ku haysay ay ka baxday.